Thyroid storm (ိသိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Thyroid storm (ိသိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်း)
Nadi မှ ရေးသားသည်။ 07/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Thyroid storm (ိသိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်း) ကဘာလဲ။
သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်းသည် အသက်အန္ဓါရယ်ရှိနိုင်သောပြသာနာဖြစ်ပြီး သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းလွန်ကဲခြင်းအား မကုခြင်းကုသမှုမလုံလောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်းတွင် နုလုံးခုန်နှုန်း သွေးပေါင်ချိန် နှင့် အပူချိန်များ အန္ဓါရယ်ရှိသည်အထိမြင့်တတ်နိုင်သည်။ ကောင်းမွန်စွာမထိခိုက်ပါက သေနိုင်သည်။
သိုင်းရွိုက်သည် သေးပြီး လိပ်ပြာပုံရှိသော အရည်အိတ်ဖြစ်ပြီး လည်ပင်းအောက်အလည်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ သိုင်းရွိုက် ဟော်မှန်းနှစ်မျိုး ကိုထုတ်သည်။ ထရိုင်အိုင်အိုဒိုတိုင်ရိုဇင်း(တီတရီး) နှင့် တိုင်ရိုဇင်း (တီဖိုး)တို့ဖြစ်သည်။ ထိုအရာများက သင့်ခန္ဓါကိုယ်အနှံရှိ ဆဲလ် များလုပ်ဆောင်ရာတွင်ပါဝင်သည်။ သိုင်းရွိက်ဟော်မှန်းလွန်ကဲခြင်း ရှိပါက ထိုဟော်မှန်းနှစ်ခုကိုအများကြီးထုတ်သည်။ ထိုကြောင့် ဆဲလ်များကမြန်စွာအလုပ်လုပ်ရသည်။ဥပမာ အသက်ရူနှုန်းမြန်ခြင်း နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။ ပုံမှန်ထက်စကားပြောခြင်းလဲပိုမြန်တတ်သည်။
Thyroid storm (ိသိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ီရောဂါဟာအလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းလွန်ကဲခြင်းဖြစ်နေသော တစ်မှ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းတွင်ဖြစ်တတ်သည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Thyroid storm (ိသိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ပျို့ခြင်း အန်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝမ်းလျောခြင်း
နှလုံးသေဆုံးခြင်းလက္ခဏာများ ဥပမာ အသက်ရူခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ သို့မဟုတ် အလွန်နှုန်းနေခြင်း ။
သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်းသည် နှလုံးသေဆုံးခြင်း သတိမေ့ခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းထိဖြစ်နိုင်သည်။
Thyroid storm (ိသိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်းသည် ရှားသည်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းလွန်ကဲသောလူများတွင် သင့်တော်သောကုသမှုမယူသူတွင်ဖြစ်တတ်သည်။ ထိုအခြေအနေတွင်သိုင်းရွိုက်မှ ဟော်မှန်းနှစ်မျိုးထုတ်မှုလွန်ကဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ သို့သော် သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းလွန်ကဲသူတိုင်း အဆိပ်သင့်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းလွန်ကဲသူများတွင် သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်းသည် အောက်ပါအကြောင်းများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Thyroid storm (ိသိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Thyroid storm (ိသိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းလွန်ကဲခြင်းဖြစ်နေသောသူများတွင် သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်းလက္ခဏာများခံစားရပါက အရေးပေါ်အခန်းသို့တတ်သင့်သည်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်းရောဂါဟုသံသယရှိသူဟုထင်ပါက ၉၁၁ သို့ချက်ချင်းခေါ်ပါ။ ထိုသို့ဖြစ်နေသူတွင် နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်း သွေးပေါင်ချိန်တတ်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။
ဆရာဝန်မှ သိုင်းရွိုက်ဟောမှန်းအားသွေးထဲမှစမ်းသက်လိမ့်မည်။ သိုင်းရွိုက် ကိုလှုံဆော်သောဟော်မှန်း (တီအက်အိပ်) ပမာဏသည် သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းလွန်ကဲသူနှင့် သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်းတွင်နည်းနေတတ်သည။်
အမေရိကန်မှ ဆေးပညာဆိုင်ရာဓါတုပညာ(အေအေစီစီ) က သိုင်းရွိုက်အားလှုံဆော်သော်ဟော်မှန်း သည် ဝ.၄ မှ ၄ mIU/L ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ တီတရီး နှင့် တီဖိုးဟော်မှန်းများသည် သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်းတွင် မြင့်နေတတ်သည်။
Thyroid storm (ိသိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်းသည် ရုတ်တရက်ထဖြစ်ပြီး ခန္ဓါကိုယ်စနစ်များကိုထိခိုက်စေသည်။ ကသမှုများကို ချက်ချင်းစသင့်သည်-ဓါတ်ခွဲခန်းမရခင်ထဲကစသင့်သည်။ သိုင်းရွိုက်အားဆန့်ကျင်သောဆေးများ ဥပမာ ပရိုပိုင်းတိုင်ရိုယူရာဆေး (ပီတီယူ)သို့မဟုတ် မီတီမဇော (တာပါဇော)က သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းကိုလျော့ချပေးနိုင်သည်။
သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းလွန်ကဲခြင်းကိုဆက်ကုသရန်လိုတတ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက ရေဒီယိုသတ္ထုကြွအိုင်အိုဒင်းဖြင့်ကုသသည်။ ရေဒီယိုသတ္ထုကြွသည် သိုင်းရွိုက်အားဖျက်ဆီးခြင်းလုပ်ပေးသည်။ သို့မဟုတ်ပါက သိုင်းရွိုက်လုပ်ဆောင်မှုအားနည်းအောင်လုပ်သောဆေးများလည်းသောက်နိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမများတွင် သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းလွန်ကဲခြင်းအား ရေဒီယိုသတ္ထုကြွအိုင်အိုဒင်း အားမကုသပေ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ်ဝန်ရှိကလေးအားထိခိုက်နိုင်သည်။ ထိုကိစ္စများတွင် ခွဲစိတ်၍သိုင်းရွိုက်အားထုတ်သင့်သည်။
အကယ်၍သိုင်းရွိုက်ဆေးသောက်နေပါက အိုင်အိုဒင်းသောက်ခြင်းကိုရှောင်သင့်သည်။ သင့် သိုင်းရွိုက်အား ရေဒီယိုသတ္ထုကြွဖြင့်ဖျက်စီးပြီးပါက သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ပြီးထုတ်ထားပါက ဖော်စပ်ထားသော သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအား တသက်လုံးသောက်ရန်လိုအပ်သည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်းကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်းကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သိုင်းရွိုက်ဟော်မှန်းအဆိပ်သင့်ခြင်းအားကာကွယ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ သိုင်းရွိုက်အားကျန်းမာစေအောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆေးအားကောင်းမွန်စွာကုသပါ။ ဆရာဝန်ရက်ချိန်းတိုင်းပြသပြီး သွေးစစ်ခြင်းမှာလိုအပ်သလိုလုပ်သင့်သည်။
Thyroid Storm. https://www.healthline.com/health/thyroid-storm#overview. Accessed November 1, 2017.
Thyroid Storm – Topic Overview. https://www.webmd.com/women/tc/thyroid-storm-topic-overview. Accessed November 1, 2017.